पूजालाई नारी भएर जिउन कठिन भएकै हो त ! – An Online Entertainment News Portal
HomeNewsKollywoodपूजालाई नारी भएर जिउन कठिन भएकै हो त !
फिल्म ‘पोई पर्यो काले’की मुख्य अभिनेत्री पूजा शर्मालाई नारी भएर जिउन कठिन भएको छ । उनले सामाजिक सन्जाल फेसबूक मार्फत एक लामो स्टाटसमा नारी भएर जिउन निकै कठिन भएको लेखेकी छिन ।
ना रीको जीवन कति कठिन छ है भन्दै जे हुदा, जे गर्दा नि नारीले सुख र जस नपाएको भाव व्यक्त गरेकी छिन् । एकाएक उनलाई यो भाव कसरी आयो यो त उनैलाई थाहा होला तर पूजाको यो स्टाटसले आफू नारी भएकोमा धेरै-थोरै पिडा त अवश्य रहेको देखिन्छ ।
पूजाले अभिनयमा बन्न लागेको नयाँ फिल्म ‘पोई पर्यो काले’ आजैबाट फ्लोरमा गएको छ । फिल्ममा सौगात मल्ल, पूजा शर्मा, आकाश श्रेष्ठ, सृस्‍टि श्रेष्ठ, सुरक्षा पन्त, सोहित मानन्धर, राजा राम पौडेल लगायतका कलाकारहरुको मुख्य अभिनय रहेको छ ।